Dawlada Turkiga oo qaaday xayiraadii qamaarka ee Dugsiyada waxbarashada – SBC
Dawlada Turkiga oo qaaday xayiraadii qamaarka ee Dugsiyada waxbarashada
Posted by editor on Diseenbar 15, 2012 Comments
Xukuumada haatan ka dhisan wadankaTurkiga ee uu hogaamiyo Ra’isalwasaare Recep Tayyip Erdogan ayaa wada talaabooyin wax ku ool ah oo ay xukunka wadankaasi dib ugu celinayso shareecada Islaamka, iyadoo Turkigu uu mudo ku dhaqmayey nidaamnka cilmaaniga ee diinta iyo dawlada kala saaraya, waxaana arintan si weyn uga qayliyey kooxaha Cilmaaniyiinta oo ku eedeeyey Recep Tayyip Erdogan in uu wadanka Turkiga ku riixayo wax ay ugu yeereen “Dawlad Islaami ah”.
Talaabooyinkii ugu dambeeyey ee xukuumada Erdogan ay ku dhaqaaqdey ayaa ah in ay meesha ka saarto go’aan in mudo ah ka jirey wadankaasi oo ah in gabdhaha Ardeyda ah aanay qaadan karinb qamaar xiliyada ay ku jiraan barashada culuunta Diiniga ah.
Arimaha la xiriira waxbarashada waxay ahaayeen loolanka ugu weyn ee ka dhex aloosan kooxaha Cilmaaniyiinta & kooxaha Muxaafidka ah ee udub dhexaadka u ah xisbiga AK ee uu ka tirsan yahay Ra’isalwasaare Recep Tayyip Erdogan, waxaana kooxaha Cilmaaniyiintu ay ku tilmaameen Erdogan iyo saaxiibadiis inay soo rogayaan sharciyo la xiriira dhaqanka Diinta Islaamka.
Qaylo dhaanta ka soo baxaysa kooxaha diin laawayaasha ah ayaa waxaa sii kiciyey ka dib markii Ra’isalwasaare Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in xukuumadiisa ay u qorsheysan tahay in ay kor u qaado “Dhalinta diinta”, taasi oo loo qaatey in da’a yarta la baro diinta, iyadoo xisbigiisu oo haatan haya talada dalka Turkigu uu si weyn wax uga badaley nidaamka waxbarasho gaar ahaan diinta ee goobaha waxbarashada.
Qaraar cusub oo ka soo baxay xukuumada Turkiga ayaa lagu sheegay in sanad dugsiyeedka 2013/2014 ardeyda dugsiyada gaar ahaan gabdhuhu inay qaadan kaaraan qamaarka ama ay madaxooda asturan karaan xiliyada ay ku jiraan barashada qur’aanka, arintaasi oo aheyd markeedii hore mid aan laga ogoleyn wadankaasi.
Erdogan waxaa kale oo uu sheegay in qorshaha cusub ay ka mid tahay in ardeydu ay iska dayn karaan dharka Iskoolka (Uniform), taasi oo uu ku tilmaamay mid dadweynuhu dalbadeen.
“Aynu u ogolaanno waalid kasta in ilmihiisa uu ugu labiso sida uu jecel yahay” ayuu yiri Recep Tayyip Erdogan oo arintan ku macneeyey mid dadweynuhu dalbadeen.
Isbadalada kale ee dawlada haatan ka arrimaha wadankaasi ay sameysay waxaa ka mid ah in ardeygu uu xaq u leeyahay in uu kala doorto waxbarashada madaniga ah ama tan diiniga ah iyadoo markii hore ay aheyd arintaasi mid aan la ogoleyn.